Pakistan oo Hindiya ugu gooddisey nooc cusub oo NUKLIYEER ah!! (Waa maxay?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Pakistan oo Hindiya ugu gooddisey nooc cusub oo NUKLIYEER ah!! (Waa maxay?)
Pakistan oo Hindiya ugu gooddisey nooc cusub oo NUKLIYEER ah!! (Waa maxay?)
(Islamabad) 02 Sebt 2019 – Islamabad ayaa ku falax gooddisey inay haysato hub nukliyeer ah oo aad u xajmi yar, kaasoo ay u adeegsan karto dalka Hindiya ee ay aadka u loollamaan sida uu sheegay Wasiirka Tareennada Hindiya.
Wasiirkan oo lagu magacaabo Sheikh Rasheed Ahmad, oo aan shuqul ku lahayn arrimaha hubka dalkaas, gaar ahaan nukliyeerka, balse wakiil ka ah tareennada dalkaasi, ayaa ku dhawaaqay in ay Pakistan samaysay hub nukliyeer ah oo aad u xajmi yar kaasoo aanu cufkiisu kaba badnayn 125 garaam.
Wasiirka ayaa sheegay in hubkan culayska yari aanu dab yar shidayn balse uu bartilmaameedsan karo meelo badan oo ka mid ah qalbiga Hindiya isagoo weliba ku shaqaynaya hab hagitaan heer sare oo shiishkiisa ka dhigaya midka ugu saxan.
Labada dalba waxay leeyihiin kayd hub oo aad u ballaaran. Afhayeen u hadlay Ciidamada Xoogga Pakistan ayaa laftiisu beri dhowayd sheegay in uu labada dal dhexsan karo dagaal nukliyeer oo uu sabab u yahay khilaafka Kashmiir.
Previous articleDF Somalia oo si rasmi ah ugu dhawaaqday xilliga uu furmayo Shirka dib u Heshiisiinta Galmudug (2 arrimood oo kahor lagu dhaqaaqayo)
Next articleXasan Sh. Max’ud oo ka hadlay sida uu u arko hadalkii Sanbaloolshe